Nei pasina zvekushandisa zvekushandisa paLinux? | Kubva kuLinux
Nei pasina zvekushandisa zveLinux?
pandev92 | | GNU / Linux, Noticias, Networks / Maseva
Musoro wacho unogona kunge uchityisa nekuti kumwe kwekushambadzira kunowanikwa, asi iyo muzana iri pasi chaizvo. Kune zvikonzero zvakawanda zvinokonzeresa zviitiko izvi uye zvandichataura nezvazvo nhasi, nekuti zvirokwazvo dai matambudziko aya akagadziriswa nhasi taizove neimwe nyaya yekuverenga.
Kupatsanurana idambudziko hombe kubva pane ino maonero, inogona kukanda kumashure ma programmers mazhinji, semuenzaniso ndinogona kugadzira mutambo unoshanda nemhedzisiro xorg, asi mune imwe distro ine imwe xorg
Dambudziko re chikamu Zvakare zvakakosha, isu tese tinogona kurangarira kuti spotify inongopa chete deb yeUbuntu uye ivo vanofanirwa uye kubva kune zvandinonzwisisa kuti yamira kupa rpm fedora, saka vashandisi vanomanikidzwawo kushandisa zvishandiso zvisina kujairika kushandura dhadhi kuita rpm, tar.xz, pisi kana chero.
Kana icho chipingamupinyi chikundwa, tinozviwana tave nematambudziko ehunhu hwefilosofi. MuLinux mune mhando zhinji dzevashandisi asi chaizvo maviri anogara achipedzisira zvakanyanya, mushandisi uyo anoti anoshandisa Linux nekuti ndeye mahara uye haina mavairasi uye mushandisi anoishandisa iyo pfungwa.
Vashandisi vanoshandisa Linux nekuti iri yemahara havangamboshandisa mari inodarika € / $ 100 yeiyo Photoshop uye zvaizopedzisira zvave kubiridzira Windows -style kana kusarudza imwe yemahara, nepo vashandisi vanoshandisa Linux kune ideology vangangoda kusashandisa application. chete rezinesi (Kune akati wandei evashandisi ava).
Ngatiisei mumamiriro ezvinhu, ngatifungidzire Windows ine 92% yemusika, ine chishandiso senge Photoshop izvo zvinotora mari yavo, zvirokwazvo hapana anopfuura matanhatu kana 6% yeavo vashandisi vangatenge chirongwa icho uye pakupedzisira vamwe vese vangazosarudza kuchibaya, ikozvino ngatifambisei izvi kuLinux uye tofunga nezve 7% yevashandisi uye yeavo 2% ivo vanongopedzisira vatenga iyo a 2 kana 6% (nekuti isu hatisiwo vese vanogadzira), zvaizopedzisira zvave mari isingadiwi kune imwe kambani iyo pakupedzisira chinhu chete chakakosha chiri kuwedzera purofiti yayo uye haifanire kutarisira zvishoma papuratifomu yairi kukura, asi nezve mari chete.
Kana paine chimwe chinhu chandave ndichinzwisisa, nyika uko ma software ese emahara hazvigoneke kuzadzikiswa, software yakafanana nezvigadzirwa zvemakambani, pamwe mumwe munhu anotenda kuti kambani hombe yaizoburitsa kamukira kechigadzirwa chechiyeredzi ( coca cola semuenzaniso), Kuti kambani yeChinese iuye izoteedzera? ( kambani yaizorasikirwa nemari yakawanda). Iyo software yenyika haina kusununguka izvo, isu tinofanirwa kunzwisisa kuti zvakaoma kwazvo kuti zvirongwa zvebhizimusi zvive zvemahara uye isu tinofanirwa kunzwisisa kuti kana tichida dzimwe nzira dzemahara kuti dzive nezinga rakaenzana, vagadziri vanofanirwa kuve nemubhadharo wekudya, kurarama hupenyu Uye izvo hazviwanikwe chete pahwaro hwezvipo, mushandi wese akakodzera mubhadharo wake.
Aya ndiwo maonero angu ekuzvininipisa, pfungwa yekuti vese software ive yemahara, Hazvibvumirane zvachose nemafungiro ekambani, inova yekuita mari nemari yepamusoro uye pamwe kune mamwe makambani akawanda kuisa maziso paLinux, isu taizofanira kuchinja mafungiro edu, asi zviri pachena kuti iyi haisi nyaya yezuva. .
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » GNU / Linux » Nei pasina zvekushandisa zveLinux?
Icho ichokwadi kwazvo, ndine wandinozivana naye anoronga makava, uye kuti mhinduro yake yakapusa pakumuudza kuti ashandise linux yaive: "havabhadhare nekuti mahara."
Ndakagara ndichifunga kubhadharisa kuti ndiise iyo, iyo yemahara hazvireve kuti yakaiswa yega, hazvireve kuti izvo zvinoshandiswa zvinowedzerwa zvega uye zvishoma zvekuti ivo vanodzidziswa kushandisa nemashiripiti.
Ini handigoni kupokana newe zvakare.
Zvinhu zvakawanda zvinokanganisa zvaunotaura mundima yekupedzisira, mashoma mashoma ekugovera ane pfungwa yekuti zvese zviri mahara software (zvinogona kuverengerwa paminwe yemaoko avo), uye kune makambani anoita mari yakawanda achitengesa nekupa kune yemahara software (iyo yakasarudzika muenzaniso, Red Hat). Haufanire kubhadharisa kutengesa chigadzirwa icho pachacho, asi nerutsigiro, zvinobatsira ...
Iwe unoti makambani haakwanise kuburitsa zvakavanzika zvavo nekuti zvikasadaro vamwe vanozoateedzera ivo voenda kugehena. Asi chiri kusaruramisira kwandiri hunyengeri hwemakambani aya, ayo asina software yemahara angadai asipo, asi zviri pachena kana iwe uchitaura nezve kuburitsa kodhi vanoisa maoko avo pamisoro yavo. Pane nzira uye nzira dzekumhanyisa bhizinesi, asi kana uchikwanisa nesoftware yemahara, iwe unofanirwa kungwara uye uzive kuishandisa.
Ini ndinokurudzira kuverenga aya maonero (uye ako makomendi):
Amilcar, hongu ndinogona kubhadharisa rutsigiro, asi kana ndikabhadharisa chirongwa changu zviri nyore kwandiri kuti ndiwane mari shoma, yeuka kuti tiri munyika yemabhizimusi uye kana ndichikwanisa kukubhadharira rutsigiro uye nechirongwa chandichada, nekuti ini ndiri Kodzero yangu, ichave isina hunhu chokwadi, asi ndinogona kunge ndakatyora maoko angu nemakore ebasa uye ikozvino ndinobhadharisa zvandiri kuda. ndizvozvo.
Ini ndanga ndichizvitaura semuenzaniso.
Wataura chokwadi asi pane zvimwe zvinhu zvinoitwa nekambani yemakomputa sezvo tichifanira kuva vakatendeka, zvese zvavanokudziridza zvinotsigirwa nematekinoroji emahara, zvazviri, nhasi hazviwanzo kuti chimwe chinhu chisabatana netekinoroji yemahara ndosaka ndichiwana chimwe chinhu icho makambani anogona kuita, uye ndiko kusununguka chimwe chinhu yekodhi yako.
Huya, damn, isu tese tine chikwereti kusununguka software, uye zviri sekutaura kwaRicardo de Galli, "Zvirinani dzorera chimwe chinhu kunharaunda yaitira zvakawanda bhizinesi rako" ...
Asi zvirinani kuti ndikusiire icho chinyorwa, chipfupi asi zvakanyanya, chakazara uye chinofunga, ini ndinoikurudzira zvakanyanya. kodhi yekuburitsa, basa retsika
Dambudziko nderekuti makambani ane mabasa etsika anofa nekuseka XD
Rega ndikupe kurara kwakamira kwechinhu chakanakisa ichi. Tsamba netsamba iwe wakanyatsotaura pfungwa dzekuona dzandagara ndiinadzo pachinhu ichi uye chandisingakwanise kutsanangura nenzira yakakwana. Makorokoto angu, kunyange ndichiziva kuti vazhinji havazobvumirani, ini pachangu ndinotenda kuti ungadai usina kuita kuti chokwadi chemamiriro ezvinhu aya chijeke.
Nehurombo, ini handigone kubvumirana nezvimwe zvezvinhu zvaunotiudza, pandev92, asi isu tinoenda muzvikamu.
Kupatsanurwa idambudziko rakakura kubva pane ino maonero, inogona kudzosera vazhinji programmers, semuenzaniso ini ndinogona kugadzira mutambo unoshanda nemazvo xorg yekupedzisira, asi mune imwe distro ine imwe xorg
Izvi zvine hukama zvachose. Kazhinji (cherekedza makotesheni) panoburitswa vhezheni nyowani yechishandiso, ine rutsigiro rwemabasa ekare. Mune mamwe mazwi, mune dzidziso, izvo zvinoshanda muXorg 7.0 (semuenzaniso), zvinofanirwa kushanda muXorg 7.1. Mune mamwe mazwi, ichi hachisi pembedzo, uye kana zvirizvo, iwe unogona kugara uchigadzirisa mutambo, handiti? Kunyangwe iwe uchibhadharira izvo, iwe unogona kuita purofiti kubva ipapo 😀
Dambudziko repakeji rakakoshawo, isu tese tinogona kurangarira kuti spotify inongopa madhiri eUbuntu uye ivo uye kubva pane zvandinonzwisisa, yamira kupa rpm kune fedora, saka mukuwedzera vashandisi vanomanikidzwa kushandisa zvishandiso zvisina kujairika kushandura iyo deb kuna rpm, tar.xz, pisi kana chero chii zvacho.
Haisi dambudziko futi. Musiki anonunura maTarball uye akasiyana ekugovera anotarisira kurongedza sezvazvinoitika nezviuru zvekushandisa.
Iyi imwe nyaya. Izvo zvinoenderana nemushandisi. Vazhinji vashandisi veLinux vanofanirwa kushandisa Windows nekuti kune zvishandiso zvakaita sePhotohop izvo zvisingawanikwe kune yedu OS. Iwe unonyatsofunga here kuti uyu mushandisi aisazobhadhara kuti ave nechishandiso chaanoda kushanda muOS yesarudzo yake? Ndine chokwadi chekuti vanhu vazhinji vanorarama nekugadzira, semuenzaniso, uye vanoshandisa Linux, vanobhadhara kuti vave nehunyanzvi maturusi aripo.
Muenzaniso weiyi ndiNero Linux, iye Nero mumwechete kubva kuWindows paLinux. Ichokwadi kuti vazhinji vanozoibira, asi izvo zvinogona kuitika kune zvinhu zviviri:
- Nekuti mushandisi haana zvinokanganisa kana,
- Zvichida nekuti haakwanise.
Muzviitiko izvi, zvingave zvakanaka kushandisa maturusi atinazvo, zvakanaka kwazvo nenzira (K3B, Brasero, Xfburn). Pazasi mutsara: Kana bhinzi yako ichitsamira pairi, iwe waizobhadhara kuti uve nematurusi anodiwa mune yako yaunofarira OS.
Kana paine chimwe chinhu chandave ndichinzwisisa, nyika uko ma software ese emahara hazvigoneke kuzadzikiswa, software yakafanana nezvigadzirwa zvemakambani, pamwe mumwe munhu anotenda kuti kambani hombe yaizoburitsa kamukira kechigadzirwa chayo (coca cola for semuenzaniso), kuti kambani yekuChina iuye izoteedzera? (iyo kambani yaizorasikirwa nemari yakawanda).
Kunyangwe kufunga kwacho kune musoro, unogona kunge wakanganisa.
Ngatitii Coca Cola ikozvino yaburitsa recipe yako pasi peimwe rezinesi seGPL. Iyo yekubheka ichiri yavo. Kana imwe kambani ikopa zvakafanana, inofanira kuziva kwayakaiwana uye inofanirwa kuzivisa shanduko yavakaita kwayiri.
Nenzira iyi, kana Coca Cola ikawana shanduko inobatsira, ichaitora nekudzokorora maitiro apfuura uye zvichingodaro. Asi ndiani acharamba achikunda? Coca Cola, yemukurumbira uye vimbiso yekuti chigadzirwa chayo ndicho chakanakisa.
Ini ndinokupa iwe kunyange yakatoreruka muenzaniso. Nei vashandisi vazhinji vasiri kushandisa Chrome neChromium kana SRWare Iron? Nekuda kwekuti Chrome yakanyanya kushata? Kwete, vanozviitira chinhu chega uye nezvimwe. Kana Chrome yanga isina izvozvo, kunyangwe vakaita maforogo mangani, vashandisi vangangoda kushandisa Chrome, inova yekutanga, mukurumbira, kushambadza, rutsigiro zvichingodaro ... Kana mumwe munhu achibhadhara chimwe chigadzirwa, vanoita kudaro vachifunga nezve « mhando, chengetedzo, garandi, mukurumari, mukurumbira ... nezvimwewo »
Handizive kana ndinoita kuti ndinzwisisike
- Zvakare nekuti haugone
Kubhururuka kuti uite izvozvo, muNero rimwe rematambudziko anogona kuve kutya kushandisa chimwe chinhu chitsva (kunyangwe zvakafanana zvinogona kutaurwa kuLinux).
Kuve nemimwe nzira iripo chiito cheoligophrenia kubira Nero Linux, K3b inoita kwandiri seyakanakisa imwe nzira uye yakafanana chaizvo naNero
Kana iwe ukapinda muforum inonzi ba ka, iwe unowana iyo neoro linux yakabiwa, asi iwe unoona? Iwe pachako uri kundiudza izvozvo usati waizoshandisa imwe application uye saka zvinoitika nezviuru zvezvimwe zvinhu.
Ndiko kuti kuomesa hupenyu hwangu pandinogona kuisa rairo iri nyore muteminal yekuisa Brasero kana K3b inoita kunge chorra
Isu tinoenda muzvikamu
Izvi zvine hukama zvachose. Kazhinji (ona makotesheni) panoburitswa vhezheni yechishandiso, ine rutsigiro rwezvinhu zvakapfuura. Mune mamwe mazwi, mune dzidziso, izvo zvinoshanda muXorg 7.0 (semuenzaniso), zvinofanirwa kushanda muXorg 7.1. Mune mamwe mazwi, ichi hachisi pembedzo, uye kana zvirizvo, unogona kugara uchigadzirisa mutambo, handiti? Kunyangwe iwe uchiibhadharira, unogona kuita purofiti kubva ipapo
Kazhinji hazvina kudaro, muLinux iwe unoshandura zvinhu zvese zviviri nezvitatu uye isu tinogara tichifanira kumirira vanababa vanoita kuti vatyairi vemakadhi vagadzirise uyezve vagadziri vemitambo, mumawindows havachinje chero chinhu nekuti havana iyo nyaya, ivo vanongo gadzira bug kugadzirisa uye vanotumira sp yega yega 2-3 makore.
Kazhinji, proprietary software (dzimwe nguva ini ndakatozviona mune yemahara software) haina kugoverwa mumatarballs asi mumapepa akafananidzwa, zviri nyore, ini ndakutopa iwe muenzaniso we spotify, handiti?
Ini ndinokupa iwe kunyange yakatoreruka muenzaniso. Nei vashandisi vazhinji vasiri kushandisa Chrome neChromium kana SRWare Iron? Nekuda kwekuti Chrome yakanyanya kushata? Kwete, vanozviitira chinhu chega uye nezvimwe. Kana Chrome isina chimwe cheizvozvo, kunyangwe vakaita maforogo mangani, vashandisi vangangoda kushandisa Chrome, inova ndiyo yekutanga, mukurumbira, kushambadza, rutsigiro nevamwe ... Kana mumwe munhu achibhadhara chimwe chigadzirwa, vanoita kudaro vachifunga nezve " mhando, chengetedzo, garandi, mukurumari, mukurumbira ... nezvimwewo "
Unozviona nenzira iyoyo asi ini ndinodzidza kushambadzira uye ndinokuudza kuti Coca Cola haafarire mumwe munhu kuziva fomura yake, kana ini ndikateedzera Coca Cola ndoti nzira yavo inobva kwavari uye pamusoro ndinoisa chigadzirwa hafu yakachipa, tsime Vanhu havachina hanya neCoca Cola, ivo vachasarudza kutenga chigadzirwa chinodhura chinonaka zvakafanana, handizive kana uchindinzwisisa. Ipapo coca cola yaizorasikirwa ne60-70% yemusika uye yaizosara iri makumi maviri kana makumi matatu, nekuti zvaisazove nebasa kuti ivo vanogadzira zvakadii, vamwe vanogona kuzviteedzera. Makambani akagadzirwa kuti aite mari (ndicho chinangwa chavo chikuru, chechipiri kugutsa mutengi), saka havasi mapenzi kupererwa nehukama hwavo mumusika. Kufunga kune musoro uye kuri nyore.
Dambudziko rekunzwisisa izvi nderekuti iwe unofanirwa kunge uri mukambani ine mabhiriyoni emauro pagore.
Sezvawataura, chinangwa chikuru chekambani kuita mari uye chechipiri kugutsa mutengi, izvo software yemahara inoita kutendeuka izvo, uye unogona kuwana mari shoma nesoftware yemahara izvozvi, asi mangwana uchawana zvimwe, sezvo yemahara software ichave iyo inopa mashandisirwo, zvirongwa, mitambo uye zvimwe zvinoenderana nemutengi, uye zvakare izvi zvichakwanisa kusarudza kuti vobhadhara here kana kwete, kunyange hazvo software iri yemahara, kwete yemahara, saka kana iwe unoda kuibhadharira, enda kumberi, pachave nevanhu vazhinji vane minwe miviri yehuma vanozoziva kusarudza. Chero bedzi makambani makuru akazviisa pamberi pevatengi, software yemahara inokunda, kana zvakadaro ndinofunga kubva mumaonero angu, sezvo ini ndichisarudza kuzvipira kupa makumi mashanu euros (nhamba iyi inogona kunge yakakwira kana kudzikira zvichienderana nemubhadharo wangu) kune firefox kana google kuva nebrowser yako kubhadhara Microsoft semari yakawanda kana yakawanda kuti vave nezvavanotaura kuti browser.
Ndinovimba rimwe zuva izvo zvaunotaura zvichaitika, asi ini handina chokwadi nazvo, vanhu vanozvida uye vane nguva yakaoma yekugovana, isu tichafanirwa kuona mumakore anotevera.
Makambani acharamba achiwana mari, izvo zvinofanirwa kuchinja ndeye bhizinesi modhi. Iwe haufunge kuti Coca-Cola ndiko kwazviri kwekusapandukira fomu yayo yakavanzika. Uye kunyangwe dai zvanga zvakadaro, kunwiwa kwekocola kwaizoramba kuripo, chete kuti kwaizofukidzwa nemamwe makambani, kana kuti kunwa kwaizove mune zvimwe zvinwiwa, izvo zvaizogadzirwa nemamwe makambani anowana mari kubva pane zvavanoita. Panogona kunge paine kambani inotungamira, asi haigone kutora chikamu chakadai chemusika, icho chingave chiri nani, pamatanho ese (hupfumi, zvemagariro, zvematongerwo enyika, nezvimwewo). Zvinogoneka kuti kudzoka pamari kwakaderera, asi pamwe zvinodikanwa kuti uwane izvo vamwe vanowana. Zvakakura zvakadii kuti vanhu vakaita saVaGates, Facebook, kana Apple, vanounganidza huwandu hwakadai hwemari nesimba. Uye makambani akaipisisa. Mahonoputa ane lousy mavari.
Basa rangu rehunyanzvi kusvika mwedzi mishoma yapfuura, raive semaneja wekambani, basa rayo pandakatanga, raive rekutengesa chigadzirwa kumusika wehunyanzvi pasi pefomula iyo makambani ese ari muchikamu aidzivirira sekunge hupenyu hwavo hwaitsamira pairi, sechakavanzika chehunyanzvi uye kuti hachina kuburitswa, kuvimba nekunyorwa kwemafomura akadaro, uye nekuisa chikamu chakanaka chebhizimusi rayo pairi. Zvakanaka, makore akati wandei apfuura, makambani mashoma mashoma akatanga kutyora izvo, achiendesa fomula yezvigadzirwa zvedu kune vatengi nekujeka uye kujekesa, kuita kuzvipira kune rakasiyana bhizimusi modhi, ufff shamwari, icho chaive chokwadi shanduko mumusika. Ehhhh, zvakanaka handisi kukuudza hupenyu hwangu, zvandaive nezvazvo, iro bhizimusi modhi rakakunda uye nhasi ndiro rinoraira musika. Iwe unoenderera mberi uchiwana mari, asi neimwe nzira, uye kwete nekudzoka kwakanyanya kwemamwe maira, chimwe chinhu chisina basa, kana kurarama, kana kugara zvakanaka. Ivo nyanzvi dzinotarisira mafomula aya anodikanwa kupfuura nakare kose, zvinoitika ndezvekuti pakashaikwa imwe, ikozvino kune vatatu, uko mumwe akabhadharisa izvo zvisina kukodzera, ikozvino ivo vanowana izvo zvavanobhadharisa uye vanokwanisa kwazvo vanoramba vachiwana yakawanda.
Ne software, ndinofunga chimwe chinhu chakafanana chichaitika, kana mugadziri muhombe kana akawanda madiki, otengesa zvigadzirwa zvavo ne linux yakaiswa, uye musika unopindura, ichave ichiwana mukana wakakura pamusoro pevamwe vagadziri. Ndeipi mutengo wekuisa windows pane samsung laptop, yemugadziri pachayo? Semuyenzaniso. Nei mutengi achifanira kubhadhara izvo? Nei kambani ichifanira kubhadhara kusimudzira kwechigadzirwa kuitira kuti gare gare isati iri yake, asi ndiani anobhadharirwa budiriro iyoyo? Kana ndikavaka imba ndikatora mugadziri kuti agadzire mapurani, zvirongwa zvaani izvozvo? Kubva kwaari, kana yangu.
Redhart ndiyo irinongedzo nhasi sekunge zvinoita. Handifunge kuti ndiyo yega, kana chete nzira yekuzviita.
Kana musika wagadzirira, iwe uchaona kukurumidza makambani kuchinjika kuti aenderere mberi nekuita mari, iwo anozove akafanana neapo aripo, akagadziridzwa kune nguva kana zvimwe zvinomuka; asi ndiwo mutemo weupenyu.
Mubvunzo wandinozvibvunza ini, uye wandisingakwanise kupindura, ndeyekuti musika unenge wagadzirira shanduko iyi uye uye riinhi makambani makuru ane mukana chaiwo wekuti zviitike ave nehushingi hwekuzviita.
Esmorga, ndezvekuti zvese zvandakuudza chikamu chemakapitalist uye akasununguka system inotekeshera pasirese, hazvina hunhu kuti vanhu vakaita saTito Bill vanowana mari yakawandisa, hongu, asi ndizvo zviripo uye ndinokahadzika kuti zvichashanduka munguva pfupi, pamwe kureba hongu (makore 40-50)
Unozviona nenzira iyoyo asi ini ndinodzidza kushambadzira uye ndinokuudza kuti Coca Cola haafarire mumwe munhu kuziva fomura yake, kana ini ndikateedzera Coca Cola ndoti nzira yavo inobva kwavari uye pamusoro ndinoisa chigadzirwa hafu yakachipa, tsime Vanhu havachina hanya neCoca Cola, ivo vachasarudza kutenga chigadzirwa chinodhura chinonaka zvakafanana, handizive kana uchindinzwisisa. Ipapo coca cola yaizorasikirwa ne60-70% yemusika uye yaizosara iri makumi maviri kana makumi matatu, nekuti zvaisazove nebasa kuti ivo vanogadzira zvakadii, vamwe vanogona kuteedzera. Makambani akagadzirwa kuti aite mari (ndicho chinangwa chavo chikuru, chechipiri kugutsa mutengi), saka havasi mapenzi kupererwa nehukama hwavo mumusika. Kufunga kune musoro uye kuri nyore
Iwe hauna kuverenga zvakanaka zvandakaisa zvakanaka? Ndo izvo marezinesi aripo. Kana iwe usingaite, iwe unofanirwa kubhadhara miriyoni mumatare. Verenga zvakare zvandinoisa pamalayisensi.
Ngatione elav, ndaverenga futi, uye kuti ndinomhan'ara kwandakatora kamukira kubva kwazviri kuzoshandira coca cola? Kusvikira pamwero wavanowana nerezinesi kwavanobhadharisa kuitira kuti ugone kushandisa mabikirwo, asi ini ndinodya mutengi ini ndinoziva kuti iwe sekambani wakateedzera kubva kune imwe, ini handina basa, kana ichiziva zvakafanana ini ndinotenga zvakachipa.
Zvakanaka, ini ndaitogona kuisa chirevo nefoni yangu xd
Pane nyonganiso yakawanda pano.
Icho chinhu chimwe chete kutaura nezve mapurogiramu ekubhadhara uye chimwe nezve kugoverwa kwekubhadhara ...
Icho chinhu chimwe chete kutaura nezve mapurogiramu ekubhadhara mahara uye chimwe nezve zvirongwa zvekubhadhara zvakavharwa ...
Commerce software (yakavharwa kubhadhara) kune akawanda, muenzaniso wakajeka iOracle DB, Oracle App nevamwe vese vemhuri. Synmatec ine ma backup ekuchengetedza emaseva eLinux uye nemabasa. Iko kune antivirus (sekushamisa sezvazvinonzwika) Avast4Linux semuenzaniso. Iko kune software yeCAD, iyo yandisingarangariri zita racho, pane mienzaniso mizhinji, iyo isingashandiswi pakuisirwa pachako hazvireve kuti haishandiswe muhofisi kana makambani.
Izvo zvisipo ndizvo zvakajairwa faux software seConvertXXXtoXXX Win Deluxe, nekuti iyo mhando yezvirongwa muLinux zviri nani abysmally kana kuti hazvidiwe, tisingataure kuti muWindows unofanirwa kupaza, kana kubhadhara. Kana Linux iri yemahara.
Pane izvo zvavasiri kubhadhara, pfffff inotarisa yekupedzisira HumbleBundle, mune zvese zviitiko vashandisi veLinux ndivo vakabhadhara zvakanyanya paavhareji. Ini pachangu ndakanga ndisati ndambotenga chero chinhu, ndakatenga HB3 HBFS uye HB4.
PS: Usati wawana mhedziso, iwe unofanirwa kuziva mushe maficha ese, kwete chete mushandisi anofarira Linux uye anoda kuti zvese zvive zvakasununguka.
Ngatione, ndinofunga ndanyatso kujekesa omo saka handifanire kuitsanangura futi. Tiri kutaura nezvezvirongwa zvekushambadzira, nekutengesa ndinoreva zvirongwa zvinoshandiswa neruzhinji rwevanhu uye ndezvechokwadi, kwete iyo CAD iyo yakachengeteka kune 1% yevashandisi vepc venyika. Ndiri kutaura nezve yakazara Nero suite, iyo yakazara Adobe suite, super yakazara radio kutepfenyura zvirongwa senge sam nhepfenyuro uye saka ndinogona kuenderera ndichiti.
Usandifananidza nekutenga mitambo gumi-euro nekutenga chirongwa chinogona kukoshesa zana nemakumi mashanu emauro.
Chokwadi, iyo yakazara Oracle suite yekumhanyisa bhizinesi yakakosha zana nemakumi mashanu haha. Iwe hauna zano zvauri kutaura nezvazvo, kana iwe ukasvika pakuziva Linux kunze kweimba yako, ita imwe chinyorwa. Chisarai '"
Ndatenda zvikuru nekuda kwemashoko ako anopa huchenjeri nekunzwisisa kuchinhu ichi, ndapota, gara uchienderera seizvi. Pano tinenge takamirira iwe.
Kana zvimwe, ngatirangarirei kuti Photoshop CS yakakosha kudarika € 1000, ngatione kuti ndiani muMongolian anotenga izvo
Chero maMongolian anowana bhinzi yake neizvozvo .. Anokura Kushinga, kuti kwete zvese zvinogona kutorwa nekusakura kudai shamwari yangu.
Ini handisi shamwari yemunhu chero ani shamwari yangu, ini ndinongova mupepeti ari nyore anotsungirira kuti vakuru vake vanomutambudza hahahahaha
elav oO unoitei kuti Ushinge uri wega: S?
Hapana che sado, ndechekuti ndinoshoreka ndosaka ndichinyora pano
Mushandisi akajairika ane chokwadi chekuti haachitengi, asi makambani angangoita muSpain anoita, nekuti saga ichipfuura iwe uchaona 😛
Izvo zvinoratidzika kunge zvakapusa kwandiri
Wese munhu ane yake nzira yekuona zvinhu ... yako nzira yekufunga nezvevakadzi inoita kunge Mongolian kwandiri, kutaura uye kufunga zvese zvaunotaura / kufunga nezvavo ... ini handizvigovane, uye kunyangwe ini ndichikumomotera neizvozvo uye ndinofunga ndizvo chako chevana, ndinoremekedza zvaunofunga. Wese munhu ane maonero ake, kuremekedza ichi chinhu chakapusa kupfuura kuzvishora 😀
Yup, ndinofungawo kuti phobia yaanayo yevakadzi ndeyeMongolian, sekufunga kwandinoita mimhanzi yaanoteerera ndeyeMongolian (uye kunyangwe ndisina kuzviona), mapfekero aanopfeka anozove ari echiMongolia uye ndosaka tichimira kumuda chokwadi? xD
Ini ndiri mumwe wemaMongolia anozvitenga 😛
Elav dixit: «... ndosaka tichirega kumira kumuda, handiti? xD »
Ichokwadi chivindi zvisinei nezvose iye mukomana anonakidza.
Hongu HAHA… anoedza kutipa fungidziro yebasass, ine host yakaipa kwazvo, asi…. Ini ndinofunga ndiye mwana munyoro ^ _ ^ …. haazivi kana kuda kuzviburitsa 😀
Pane imwe nguva anowana mumwe munhu pasina mubvunzo anozoita kuti "apengenuke" LOL !!!
Zvinoratidzika kunge zvakapusa kwandiri kuti nharo yako yekusabvumirana neni ndeyekuti haudi kuve nemusikana, ipapo vanhu vanogunun'una nezve kuburitsa kunze kwehari.
Huya, ini handizive kuti kuva nemusikana kunei nekutenga Photoshop kana kwete.
Tonto ndiyo nu reggaeton yemapositori aunofarira uye mapfekero angu ndizvo zvandinoudzwa nemumwe munhu.
Anoda? Zvakashata iwe haundinyatso kuziva ini, iwe wakabvisa hupenzi nekukurumidza (kunyangwe iwe uchinakidzwa mukutaura).
Ngatione, idanho risingatauri kushandisa mafuro eiyo Photoshop kana iwe usina, nekuti izvo zvakakosha $ 399 ndeyekuvandudza kana ndisina kukanganisa.
Hatisi kuzochinja makambani kuti ashandise Gimp kana Krita asi itadze, uye pamusoro nedambudziko remabhora, makambani haakwanise kubhadhara Photoshop.
Elva, Gatico mojao une mhinduro here pamusoro pevaroora mubhokisi rako rekushandisa, kana iwe usina codec shandisa VLC
Uye ivo vashandisi vanoishandisa nekuti ivo vanongoda sisitimu yekushandisa uye inovagutsa kupfuura chero imwe maererano nehunyanzvi, maitiro ...?
Ini ndinofunga ndakaburitsa pachena nezve * maviri makuru marudzi evashandisi *.
Panzvimbo pekufungidzira kuti ini handiverengi zvakanaka nekuti haufunge kuti ndinoverenga zvakanaka uye kuti ndichiri kuchengeta mubvunzo wangu nekuti ndinouona seboka rakawanda 😉
Munhu anorarama nemanyepo 🙂
Iyo yakanaka nharo-inotungamirwa nharo ... mira, urombo, iyo mhedziso inhare yakagadzirwa nemhepo.
Zvirinani, uye rinoenda sezano, haugone kuzvidzivirira (ikozvino iwe uchandiudza kuti hausi) uye chechipiri chimwe chinhu chakakosha.
Kana iwe ukasimbisa chimwe chinhu, tanga waratidza. Kana iwe ukataura kuti pane maviri chete marudzi evazhinji vashandisi, ratidza (data, ongororo ...). Kana iwe usingakwanise kuipokana, zvirinani kuzvifungira (ndinokuyeuchidza kuti iwe wakangosvika pamhedziso iyoyo). Pasi pekusarura kwekusarura, ndinogona kusimbisa kuti vashandisi veLinux vese vatorwa kubva padanho rechina vanogara mumatumbu ehoromba mammoth
Kupindura "murume anorarama nemanyepo" ndezvokunyepedzera zvechitaira "iwe hauzive", "unonzwisisa sei iwe", "iwe uri troll", "iwe uri pro x", wakareba etc. Iwe haupokane navo, iwe unotenda iwe une chiremera chakakwirira kupfuura mumwe murevereri, ivo vanonetesa uye havatombobvumirana
Pamwe iwe hauna kutarisira mhinduro kumubvunzo zvichibva pane nharo uye kwete kushatirwa
Nharo dzakatonyorwa muchinyorwa, hazvidi kuti utsanangure chimwe chinhu chaunoziva mushe, pinda muylinux, blogdrake nedzimwe nharaunda zhinji dzeSpanish uye iwe uchaona zvandinotaura, iwe unofanirwa kuve monki anogara pamusoro pegomo kuti asazvione. Naizvozvo, kana iwe uine tarisiro yakasimba, unorarama nekunyepedzera, uye unogara zvakanaka kwazvo navo 🙂 asi hazvisi zvechokwadi.
Panguva ino zviri pachena kwandiri kuti hauzive mutsauko uripo pakati pekupokana nemhedziso
(Kubva lat. Argumentum).
1. m. Kufunga izvo zvinoshandiswa kuratidza kana kuratidza chirevo, kana kugutsa mumwe munhu nezve izvo zvinosimbiswa kana kuramba.
3. f. Kugadziriswa kwakatorwa pane imwe nyaya mushure mekuburitsa nhepfenyuro.
Rae rakanaka chose uye zvese zviri muzvinyorwa.
RAE, ini handizive kana iwe uchiziva iyo, haina mukurumbira wakawanda, ndinokuraira iwe kuti ubvunze kune philologist kana muturikiri. Kune rimwe divi, ini ndinokurudzira kuti uzvitarise muMaría Moliner, iri duramazwi riri nani
1 m. Kufunga nezvayo inopikiswa kana * kupindura.
2 Chikamu chinorondedzerwa chebasa rekunyora, bhaisikopo, nezvimwe. Chiito, * chidzidzo, chinomisikidza, ngano, kunyengera, nyaya, perstasis, dingindira, zano. Kubata, anagnorisis, catastasis.
3 * Pfupiso iyo zvirimo nekuparadzirwa kwebasa rekunyora zvinoburitswa, dzimwe nguva kunoiswa pakutanga kwaro.
4 * Chiratidzo kana chiratidzo.
Kana iwe uchida kuenda mberi iwe unogona kuenda kune duramazwi reOxford iro rine mukurumbira (muChirungu):
2a chikonzero kana seti yezvikonzero zvakapihwa kutsigira zano, chiito kana dzidziso: pane nharo yakasimba yekuendesa kukwikwidza kwepamutemo [nechikamu]: akaramba nharo dzekuti kuchengetedza nzvimbo kunodhura
Kunyangwe bhuku reuzivi kana dudziro yefilosofi (kana kunyangwe imwe pfungwa)
Asi nei uchienda kure zvakadaro kana tiine wikipedia:
Kukakavara kunonyanya kunetsekana nekusvika pamhedziso kuburikidza nekufunga zvine musoro kunoenderana nenzvimbo.
Izwi rekuti nharo (kubva muchiLatin argumentum): humbowo kana chikonzero chekururamisa chimwe chinhu sechokwadi kana chiito chinonzwisisika; kutaura nemuromo kana kwakanyorwa kwekufunga.1
Mhedziso chirevo pakupera kwekukakavadzana, mushure meimba. zano, kwete basa raro
Sekuziva kwangu rae muSpain kana iine mukurumbira, zvinondifadza zvishoma, nekuti ini handigare kumwe kunhu.
Kune rimwe divi, iwe unonditevera, kunyangwe neRAE, kana iwe uchida kuona nharo undiudze kuti varipi nekuti mune yako chinyorwa ini ndinongoona mhedziso, iyo ndima pachayo mhedziso.
Ini ndakapindura kuti zvimwechetezvo, neRAE, hauna kupa nharo, uye unotsauka pachinyorwa.
RAE haina mukurumbira wese (pamwe ndizvo chaizvo kupfuura zvandataura) kuti inofanirwa, pakati pezvimwe zvinhu, nekuti kunyangwe ichiumbwa nemakomisheni, zvigaro zvinopihwa vanyori uye kwete kune philologists avo ndivo vanonyatsodzidza mutauro. Mumwe weavo vakapa RAE mukurumbira ndiLázaro Carreter uyo akasuwa akafa makore mashoma apfuura uye chigaro chake chakapihwa Javier Marías, ane mashandisirwo emutauro, angangoita anopokana.
Kana iwe uchida rumwe ruzivo kune mamwe mabhuku
Pakupedzisira izvi zvakakonzera kuwedzera mweya
Ehe zviripo Algoban, zvinoitika ndezvekuti, kubva pakuona kwangu,pandev92 kuitira kutsigira zano rake rekuti nei pasina zvirongwa zvekutengeserana uye, pamusoro pezvose, kuti hazvigoneke kuti vange varimo GNU / Linux Anovabvisa pamadiro. Kana icho chinhu -vashandisi vatinoshandisa Linux nezve chokwadi chiri nyore chekuti tinochida kuti chive chinoshanda- inopinda sechirevo mhedziso yako yese inodonha.
Warevesa PandevIzvo hazvina kukodzera kubata nevakomana senge iwe, ini ndaive ndisina kukanganisa mukufunga kuti munzvimbo ino pane vanhu avo kana vachinyora musoro vaive nehukuru hwakakwana kuti vagamuchire zvinopesana nepfungwa, asi zvakare nehungwaru hwakakwana kuti vakwanise kupokana kubva pakurongeka kwemazano uye kwete nehunhu husina hunhu senge hwako asi iwe ndiwe mutema mupunga mukomana.
Kwandiri, mabatiro awakaita iwe Elgoban zvinopfuura kusaremekedza, nekuti hapana neimwe nzira yaakakodzera mhinduro senge iyo yawakamupa sezvo aine kodzero yekubvunza uye kugamuchira mhinduro zvichibva mukukakavara uye kwete kwaanobatwa sebenzi.
Uye sezvo ini zvechokwadi ndisingagovane nzira idzodzo uye zvinoita kunge zvisiri kushandisa izwi reMongolia nenzira yekunyepedzera, sezvo ichishandiswa kusatumidza zita mujaho asi dambudziko rekuzvarwa naro, sezwi rakafanana rekusazvibata, ndinoda kutenda mukana wakanyanya Alejandro Chemhondoro Ernesto Vakandipa kutora chikamu pamwe nemutsa uye chivalrous kurapwa kwavakandipa uye ndinovimba kuramba ndichivimba nehukama hwavo, asi ndiri kuenda pamudyandigere semubatsiri wenzvimbo ino ndichivashuvira rombo rakanaka.
Ndine urombo Tina anga asina kuona mhinduro yako. Warevesa
Mubvunzo wangu waive wenyaya. Ini handitarisiri mhinduro asi, pasi pemubvunzo, ita kuti maonero angu azivikanwe uye kukurudzira kutaurirana.
Asi kana iwe usiri kuda kukurukura kana kutaurirana uchishandisa nharo kana dhata uye iwe uchazoenda wakanangana nekurwiswa pachako, zvirinani kunyarara.
Nhaurirano padandemutande dzinogona kunakidza dai vanhu vaine ruzivo rwekufunga uye kunyepa, sezvo vachibatsira kuvaka nhaurirano dzakabatana uye dzisingachinjiki dzinovakirwa pazvivakwa zvechokwadi kwete pane "Ini ndafunga chii."
Usanetseke kana nyaya yako isingaite seisina hunhu kwandiri. Mukukurukurirana padandemutande ndakaona zvakawanda zvekuti zvidiki zvinogona kundityisa kana kuita kunge vasina hunhu.
Senge benzi randisingazive, asi akaedza kundiita kuti ndiratidzike semunhu asina ruzivo, kuti kusandiziva kunosekesa. Asi haisi nyowani futi. Imwe yeaya manomano ayo anoshandiswa mukukurukurirana ndeaya manje akasvinwa "hauna zano", iro rinoshandura "Handina zano asi ndikasiya chirevo ichi ndinozvinunura kubva mukukakavara uye zvinoita kunge ndine zano". Kunyanya akapihwa zvakashata kusaziva kwake.
PS Ikotoni 😉
Chekutanga kukumbira ruregerero chiuru, kushanda zvakapfurikidza hakuna kunditendera kutora chikamu.
Iye zvino ngatitaurei kune iyo poindi: Nei pasina zvekushambadzira mafomu mu Linux? Kubva pane yangu maonero nekuti haina kudikanwa, sekuziva kwangu, hapana distro yakamboita nenzira yakakomba nayo Adobe, semuenzaniso, kutaura mubatanidzwa webhizinesi. Vashoma vashandisi haisi yekunyepedzera kubvira vashandisi ve MacOSX isu hatiratidze zvinopfuura zvishanu kubva muzana zvevashandisi vese vePC.
Dambudziko rakakomba, sekuona kwangu, nderekuti Linux yakasungirirwa zvakasimba kune pfungwa idzo, kunyangwe dzakanaka uye dzakanaka, hadzishandi. Ini ndinofunga zvishoma pragmatism hazvingakuvadze.
chivindi, Ndakagadzirisa pasuru yacho zvishoma kudarika mwedzi minomwe yapfuura Adobe CS4 a Adobe CS5 uye ini handina kubhadhara inopfuura US $ 350 yemumwe nemumwe. Ndiri kutaura nezve mapakeji akazara: Photoshop, Illustrator, Indesing...
Tiri kutaura nezve chokwadi chekuti vazhinji vevashandisi veMac senge dingindira rekugadzira nekugadzirisa….
Izvo hazvina chekuita nazvo, chii chisingakwanise distro Linux -Mint semuenzaniso- ita mubatanidzwa wezvekutengeserana ne Adobe uye kubva ipapo tangisa mushandirapamwe wekukwezva ese iwo mamirioni e graphic vagadziri vachiri kushandisa Windows?
Izvo ndezve kusvika pamusika mutsva, kwete kutengesa kune avo vatove kushandisa Linux
Ehe inogona kuuya, asi zvirokwazvo Adobe inozopedzisira yakukumbira iwe mari, iyo yakapusa, kana linux iri 1,4%, linux mint inofanira kunge iri 0.15%, iyo yakakwira yaizozadzikiswa dai ma distros ese aizoibvunza, uye riini Ini ndinoti zvese ndizvo zvese.
«... asi zvirokwazvo adobe anozopedzisira akubvunza iwe mari»
pandev92, ndiyo mhando yekufunga nayo HAZVIBVIRI kuti rimwe zuva mu Linux Iva nekutengeserana. Ivo vanoti ndezve nyaya yemari, kunyangwe chivindi anoisa nhamba inopenga -US $ 1,266.66 pamutengo wekutsinhana- semutengo we Photoshop Kana izvo zvisiri zvechokwadi, ndinodzokorora kuti ndakabhadhara US $ 350 yeimwe neimwe YAKAKWANA kukwidziridza pasuru.
«... kana linux iri 1,4%, linux mint inofanira kuva 0.15% ...»
Ndozvino zviriko uye zvinofanirwa kuramba zvakadaro? Isu takapfupika here zvekuti hatigone kufunga nezvekuti vangani TINOGONA kuva?
Ini ndinodzokorora, nekuti ingori nyaya yehu * vos ... nekushaikwa kwechido.
Isu tanga tichitaura kwechiuru chemakore kuti tichapasa 1% uye hatisati tasvika pa2, munotenda nemoyo wese here kuti pasina munhu anoisa paston mukushambadzira tichazoswera rimwe zuva kubva pa2? Nyika ino yakavakirwa pachinhu chimwe, mari, ndiyo kiyi yekubudirira kwebhizinesi uye kana usingakwanise kuzadza terevhizheni yenyika neruzhinji, usatarisira kuti uchanzvenga kukura nekuti vanhu vazhinji havatozive nezvemakomputa, vanoshandisa izvo zvakauya zvisati zvaiswa kuona iyo facebook, yeichi, hatimbofambira kumberi, yakapusa. Haisi kuisa mazai, iri kukanda mari nemari yakawanda uye kugona kupa chigadzirwa chinomira kubva kune vamwe, pane chimwe chinhu icho vamwe vasingapi (izvi zvinonzi kukwikwidza mukana wekusiyanisa), asi iwe unokwanisa , zvakaipa tinoenda. Zuva iro Google rinoisa 1000 bhiriyoni emadhora kusimudzira Linux, ipapo ini ndinogona kutenda kuti isu tichawedzera zvakanyanya.
Iyo adobe suite yaive yemahara kwandiri, ingotaura navo kana iwe uri mudzidzi, asi chokwadi hatisi kutaura nezve mushandisi kuisa mari, asi iyo distro iri mubvunzo kubvumidza adobe, icho chinhu chiri nyore kunzwisisa, izvo haufanire kutsanangura.
Zvingave zvinobatsira zvakanyanya kugadzira mitambo yeLinux pane kupfuudza chirongwa chakadai kuchikuva chedu. Mutambo unogona kukoshesa 40,50 euros, kana zviuru makumi matatu zvevanhu vakautenga, yakatodzosera mari, nekuti sezvo ichiwanika, vanhu vazhinji vanozoitenga, asi patinotaura nezveadobe photosho`p tiri kutaura nezve chishandiso chehunyanzvi uye nhoroondo zvakasiyana,.
"... isu hatisi kutaura nezve mushandisi achifanira kuisa mari mukati, asi distro iri mubvunzo kubvumidza Adobe, ichi chinhu chiri nyore kunzwisisa kuti hazvina kana basa kuzvitsanangura."
Ndakainzwisisa kubva pakutanga, asi ndeyekutora priori iyo Adobe Izvo zvichaita saizvozvo, izvo zvinongova zve kuzviisa pasi. Zvirinani kusvika parizvino handisi kuona chero distro mutungamiri achireva chakadai.
Linux ine kugona kukuru mu graphic dhizaini indasitiri nekuti Adobe vari kuda kwazvo nehurongwa, ndicho chikonzero nei tichida kuvashandisa mu MacOSX izvo mukati Windows kunyangwe paine mutsauko wemitengo pakati pekombuta neimwe.
Kana ivo vagadziri vehunyanzvi vanoshandisa nhasi Windows, nekuti havagone kutenga apuro, vaigona kushandisa Adobe pane system yakagadzikana uye yakasimba se Linux vangadai. Zvakare, izvo zvauri kuenda kuzochengetedza mu Windows Uri kuenda kunoisa mari mupasuru, iyo yemutengi yatove purofiti yakakura.
Asi zvakare chingori muenzaniso, uye ini ndakachiisa nekuti Adobe yakasimba iyo pachayo yatoshandisa mari yakawanda kushambadza, pamusoro pekuve inozivikanwa pasi rose asi kana uchida, tinogona kupa muenzaniso kune Sega. Izvo zvinotisvitsa kune zvakafanana ... inyaya yekuda kudzoka kumashure zvishoma -kana zvakawanda- kubva pakuchenesa kwemahara software.
Zvino, iyo poindi yandiri kuiisa kubva pane yangu mamiriro uye inogona kana inogona kunge isingaite senge kwauri, asi ndizvo zvandinoona, kunze kwekunge mubvunzo wako wekutanga "Nei pasina zvekushandisa zvekushandisa muLinux?" be rhetorical uye yakangoshanda chete kuburitsa maonero ako sechimwe chinhu chakakosha kukosha, icho chaunofanira kujekesa kuti usazopambadza imwe nguva.
Ichokwadi kuti havazi vanhu vazhinji vanoziva nezve komputa uye kuti vanoshandisa izvo zvakatsanangurwa, ini, pachangu, ndinofunga kuti sevashandisi veLinux zvishoma zvataigona kuita kuedza kugonesa vanhu vazhinji kuti vashandise yedu yekushandisa system, sezvo iine zvakawanda mamwe mabhenefiti kupfuura Windows, nekuti vazhinji vedu hatibhadhare kana kupa chero chinhu zvacho, zvirinani tibatsire zvakanyanya sezvinobvira, nenzira iyi, isu tinogona kungomiririra 1% chete, asi kana mumwe mushandisi weLinux achikwanisa kugadzira munhu asina kuroora anotanga kushandisa Linux futi, unogona here kufungidzira kukanganisa kwaizove nako pasirese? Iyo 1% yaizokura exponentially! Uye chokwadi ndechekuti kune vanhu vazhinji vasingazive komputa sainzi, kunyanya vakura, asi zvakare vadiki vari kuwedzera kupinda munyika ino kare uye vanozoziva kupfuura isu, zvirokwazvo, izvo zvaunofanirwa kuita kuvadzidzisa kubva vachiri vadiki uye gadzira yako OS "default" Linux, uye kwete Windows
Ndiri kureva iyi, kunyangwe iri suite yakazara, uye hongu, mutengo wacho unopenga:
Uye nei uchishandisa zvakawandisa pane iyo kana paine izvi http://www.adobe.com/products/creativesuite/design.edu.html ?
399 $ LOL, ichiri yakachipa kwazvo xD, ndinotenda mwari ini ndiri mudzidzi uye ndaisafanirwa kuibhadharira XD
Ini ndinobvumirana nemashoko aTina Toledo, ita mubatanidzwa, mint inogona kuva 0.15%, asi kuti uite mubatanidzwa unofanirwa kufunga nezve izvo zvinogona kuve, nebasa chairo.
Chikamu chimwe chandinotenda, uye icho chete ichocho, ndechekuti iwe unogona "kutya" zvicharehwa naRichard Stallman, iwe unoona kuti anti kodhi yakavharwa, uye ini ndinodzokorora, izvo zvakangoitika kwandiri, sekutevera kwevanhu vazhinji ...
Iniwo handibvumirane nemashoko ako, kuti software inogadzirwa ndeye mahara hazvireve kuti murongi ari kubvunzwa haabhadharwe basa rake (kutaura zvazviri, vanozviita muRed Hat, sezvavakatokuudza kare, kana muNovell / Attachmate, kana Canonical), mutsauko nepropetiary software ndeyekuti vanozvipira programmes vanogona zvakare kupa kodhi nemhinduro, uye kunyange kushandisa kodhi kugadzira imwe application, asi GPL rezinesi pachayo inodzivirira vanyori ve software yakadai kurwisa kunyorerwazve kwekodhi nevanhu vatatu, kumanikidza kureva vanyori vekutanga.
Asi sekutaura kwandakaita, iko kusanzwisisika kwekubatanidza yemahara software nemahara software, uye iro zita rakaipa rausingakwanise kuwana chingwa chako naro.
Tichaona. Iwe unobhadhara gimp here? Iwe unobhadharira konversation, xchat, clementine, libreoffice, scribus, netbeans, 97% yesoftware iri mumidziyo nezvimwe?
Iwe unorangarira here mienzaniso senge wepomuk mushandi uyo anga asina kubhadhara kwemwedzi? Iyo hurongwa hausi yekambani yekukubhadhara iwe, iyo nenzira, kune vashoma vanobhadharisa kubva kwavari, asi kuti iwe ubhadharise mushandisi wechirongwa chako, chakajeka uye chiri nyore, asi chokwadika kana iwe usingade kuona, haudi kuona. Haasi munhu wese anoshandira Novell, Canonical, uye Red Hat.
Asi kunyangwe ukasavashandira, chii chinokutadzisa kubhadharisa software yawakagadzira kunyangwe iwe uchipa rezenisi pasi peGPL?
Izvo zviri nyore kwazvo zvinorema, ndinogona kubhadharisa software yandinoita, zviri pachena, asi kana yatengesa imwe inogona kuzvipa, unondinzwisisa here? ndizvozvo chete.
Nenzira, ndinobvumirana zvachose naEsmorga.
«Zvinhu zvakanakisa muhupenyu zvakasununguka
Asi iwe unogona kuchengeta 'em kune shiri uye nyuchi ...
Zvino ndipe mari, (ndizvo zvandiri kuda)
Wako lovin 'andipe mufaro wakadai,
Asi wako lovin 'haandibhadhare zvikwereti zvangu… »
Zvakatorwa kubva Mari (Ndizvo Zvandinoda)
Zvakajairika kuti mukati mepasi GNU / Linux apo pakamuka mubvunzo Nei pasina zvekushandisa zveLinux? Ngatipedzei nekuzviputira isu mune yemahara software roll, ayo asingaverengeke mabhenefiti uye mabhenefiti uye mubvunzo wekutanga -Nei pasina zvekushandisa zveLinux?- Inopedzisira yave yekutenderera kwatinotendeuka kuti tiwane kubuda nemugwagwa unokodzera isu zvakanyanya.
1.-Izvo hazvishambadze nekutengesa nekuti vashandisi veGNU / Linux vangori zvishoma kupfuura 1% yevashandisi vese vePC.
Ichi ndicho chokwadi chehafu. Kunyange hazvo chiri chokwadi kuti huwandu hwazvino hunoratidza kuti izvi hazvireve chipingamupinyi, chii chinofanira kuyerwa, asi, ndevangani vashandisi ve Windows vanoda kutamira ku GNU / Linux asi havazviite nekuti hapana vhezheni yesoftware yavanoshandisa sechishandiso chebasa ku GNU / Linux
Adobe haana kusvika iko kuri kubheja neruzhinji rwevashandisi ve Windows asi ne, ipapo, vashoma vashoma vevashandisi ve Apple macintosh, uyo mumakore apfuura ave vatengi vake vakavimbika kwazvo kunyangwe paine kusawirirana mu apuro y Adobe uye isu tinofanirwa kuve vakatendeseka, kana nhasi makomputa e apuro Ivo vane mukurumbira wakasarudzika seimwe yeakanakisa maturusi easina-mitsara vhidhiyo yekugadzirisa uye graphic hunyanzvi nekuda kweichi chakajairika budiriro.
2.-Iko kuvandudzwa kwesoftware software uye kuwedzera kwayo kwaizouraya kuvandudzwa kwemahara software
Izvi hazvisi zvechokwadi zvachose kana. Kune makuru emahara software zvinongedzo zvine budiriro zvinomira, senge GIMP y Vhura Office semuenzaniso, kwete nekuvapo kwe Photoshop y MS Office asi asi nekuda kwekushaikwa kwezviwanikwa. Pano saka haisi iyo «Kuvapo kwe ...» asi pane kushomeka kwechokwadi tsika yekusimbisa hupfumi kune yemahara software vanogadzira.
Ndine chokwadi, kunyangwe ndisina huwandu, kuti vanopfuura makumi masere muzana evashandisi ve GNU / Linux avo vanodzivirira zvakasununguka software muhupenyu hwavo vakapa peni. Vazhinji vachati "Zvakanaka ... ndinobatsirana ndichishandisa chirongwa ichi uye kana ndikawana tsikidzi ndinomhan'ara" uye izvo zvinoshanda chaizvo, asi sekutaura kwechimedu cherwiyo rwandakaisa pakutanga «Zvinhu zvakanakisa muhupenyu zvakasununguka, asi zvisiyire shiri nenyuchi, izvozvi, ndipei mari, ndizvo zvandiri kuda. Rudo rwako runondikonzera kushushikana kukuru, asi rudo rwako harubhadhare zvikwereti zvangu ... »
Kune rimwe divi, ini handifarire, nekuda kwezvinangwa, kana ndingaite kuti ndigadzirise kodhi ye Adobe Photoshop, kutanga nekuti ini handitomboziva kuzviita uye chechipiri nekuti ini handifarire kuzviita, ndakaitenga kuti ndiishandise kwete kuigadzirisa. Izvi ndizvo chaizvo zvezvinhu zvinonyanya kukosha kwandiri uye ndinoshamisika, izvi zvine basa here kune vazhinji vevashandisi vePC vane hanya chete ndeyekuti software yavanoshandisa ndeyekuti inoshanda nemazvo uye kuti inoita izvo ZVINODA KUTI IITE. ?
3.-GNU / Linux inomiririra uzivi hwemahara software uye nekudaro zvingave zvisina kunaka kubvuma kupindirwa kwesoftware, kunyangwe zvakadaro kana iri yemahombekombe makuru ane chinangwa chega kuunganidza hupfumi
Ichokwadi zano rakanaka kwazvo randinobvumirana naro ... asi kunyangwe zvakadaro ini handioni magumo anobatsira kana mirau isina kugadzirwa iyo, zvirinani, inovimbisa vanogadzira kuti vadzore mari yavo uye vawane mubairo mune imwe nguva yenguva.
Kune rimwe divi, makambani senge Apple, Microsoft y Adobe kusvika padanho rekuti zvinoita kunge vasina kana chavakamboita chakanaka. Uku kunyanyisa, kufunga kuti zvese zvakaora mukati Denmark, haibvumidze kuteedzera mazhinji maitiro ayo ayo, pasina mubvunzo, angapa kurongeka kwakawanda uye kukurudzira praxis yesoftware yemahara. Pandakagadzira musoro wenyaya pa Gimp Ndakaivhura nekutora mutsara kubva Rudyard kipling: “Varanda vatanhatu vakatendeka vakandidzidzisa izvo zvandinoziva; mazita avo ndi sei, riini, kupi, chii, ndiani y nei. " Zvinotaridza kwandiri kuti mundima yemahara software iyo "chii" uye "nei" iri pachena, asi kwete iyo "sei"
4.-Commerce software inodhura kwazvo, saka chete 'maMongol' ndivo vaizoibhadhara
Pakutanga, zvinoita sekunge ini kushayikwa kwekuremekedza kushandisa sekufananidza mamiriro eboka revanhu vane hunyanzvi hwakasiyana semuenzaniso webenzi, uye zvishoma izvo chero munhu anozviita anofanira kukumbira ruregerero.
Zvatove mukati menyaya, zviri pachena kuti kune zvinhu izvo GNU / Linux kuti ihafu chokwadi ... kana hafu manyepo, zvinoenderana nezvinotarisirwa, uye chimwe chazvo ndechekuti software yekutengesa inodhura kwazvo.
Idzi inhema uye ndichaenda kuratidza kuti nei: imwe yemapakeji "anodhura" ari, pasina mubvunzo, ayo anopiwa Adobe... zvirinani izvi ndizvo zvinodzivirirwa zvemahara software zvinodzokorora kushambadza nauseam, zvisinei hazvo zvakawanda -ruzhinji rwavo- muhupenyu hwako wakamboshandisa chero software Adobe Sechishandiso chebasa, saka, havakwanise kuyera mutengo / mutengo wemibairo.
Asi, uyezve, vanosiya, kunze kwekusaziva kana chinangwa, icho chokwadi chekuti Adobe inotengesa mapakeji nemitengo iri pazasi pekukosha kwekushambadzira kwavo kuvadzidzi nevadzidzisi (US $ 450) uye kunyangwe muzviitiko zvakawanda unotovapa.
Zvino, ndinobvuma kuti iyo US $ 1,900 iyo kambani kana nyanzvi inobhadhara iyo pasuru inogona kunge iri mari yakawanda, asi chimwe chinhu chinofanirwa kutariswa: chinobviswa pamitero, saka hachionekwe semubhadharo.
Mhedziso yangu Linux Izvo hazvisi zvachose pasi pechisarudzo che "monopolies" asi asi kune iwo mafungiro akafanana, mune dzakawanda zviitiko zvakanyanya, zvevatungamiriri ve GNU / Linux uye ruzhinji rwevashandisi vayo vanoona aya "masimba" semuvengi mukuru wekukunda. Kana zvayakanakira nezvayakaipira zvikanyatso kuongororwa uye paine kubatana pakati pemativi maviri, chimwe chinhu chichava. Zvichakadaro ini ndichaenderera mberi ndichifunga kuti chinhu chete chisipo ndechekuti iwe unoda ... hapana chimwezve.
Ndatobata Adobe kuti ndione kuti vhezheni yavo chii uye nekudaro ndavhara hurukuro iyi refu.
Iwe unovhura musoro wenyaya uye unovimba kuti hapana mamwe maonero ekuona here? Iwe murume, ndakakubvunza kare: kana iwo mubvunzo waunonyora nawo chinyorwa chako waingova senge wekutaura kusimudza maonero ako, zvakaringana kuti utaure uye unditende kuti ndinorega kusiya maonero angu, hazvidi kuti ubvunze Adobe. Asi kana uri mubvunzo wakavhurika kuti isu tese tifunge, ini handioni chikonzero nei zvichikunetsa izvo vamwe, vanoda Amilcar, Elav kana ndinofunga kuti iwe. Ndizvozvo nenzira iyo ini ndinonzwisisa yako "Ndatobata Adobe kuti ndione kuti vhezheni yavo chii ndobva ndavhara hurukuro iyi"
Ndine urombo chaizvo nekusiya maonero angu pamusoro WENYAYA uye sezvo zvisingaite kuzvidzima ndega, unogona kuzviita, kwandiri uku ndiko kupindira kwangu kwekupedzisira panguva ino.
Iko kwazvinoti: «se Amilcar, Elav kana ini ndinofunga kuti iwe »
Inofanira kuti: «se Amilcar, Elav kana ini ndinofunga ZVAKASIYANA kupfuura iwe »
Sekuda kwako, wakasununguka kududzira zvinoenderana nekuda kwako, asi wakadudzira zvisizvo, asi sezvo wataura zvawataura, uye handisi kuzoedza kuzvitsanangura, ndine zvinhu zviri nani zvekuita.
Zvakwana, kwete imwezve mhinduro.
Zvinhu zvakawanda zvichachinja kubva zvino zvichienda mberi ... izvi zvangove zvakawandisa.
Iyo $ 25 komputa inouya neLinux
Iyo yakanakisa Linux mini-kugovera